ယောင်းရဲ့ သွေးအမျိုးအစားအရ ယောင်းရဲ့ အချစ်ရေးအခြေအနေ ဘယ်လို ရှိနိုင်လဲ? - For her Myanmar
B သွေးပိုင်ရှင် မင်မင်ကတော့ အကုန်နီးပါးတိုက်ဆိုင်တယ်ရော
ယောင်းတို့ရေ… အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုရုပ်ရည်မျိုးမှ ၊ ဘယ်လိုစိတ်ထားရှိသူမှ ၊ ဘယ်လိုအပြုအမူရှိသူတွေမှ ဆိုပြီး နှလုံးမူထားတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိကြတယ်ဟုတ် .. ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တွေက ကိုယ့်အကြိုက်ကို လိုက်ပြီး ကွဲပြားနိုင်တာပဲလို့ သမရိုးကျတွေးလို့ရပေမဲ့ မွေးနေ့တူတဲ့လူချင်း အကြိုက်တူတတ်တာမျိုး၊ ရာသီဖွားတူချင်း အကြိုက်တူနေတတ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိနေတာကို ယောင်းတို့ သတိထားမိကြမှာပါ… (ဥပမာ – အမွှာအများစုက အကြိုက်ချင်း ထပ်တူကျနေတတ်တာမျိုးပေါ့…) ဒီလိုဆိုရင် သွေးအမျိုးအစားတူတွေမှာလည်း အကြိုက်ချင်းထပ်တူ ကျနေတာတွေ ရှိမှာပဲလေ… ဒီတော့ မင်မင်ကနေ သွေးအုပ်စုကို လိုက်ပြီး ရွေးချယ်မိမယ့် အချစ်ရေးပုံစံတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်…
A သွေးပိုင်ရှင်တွေက ရင်းနှီးပွင့်လင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးကို သဘောကျတတ်ပါတယ်.. အချိန်တိကျတဲ့သူမျိုးကို နှစ်ခြိုက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်ကြီးမားသလို အရာရာတိုင်းကို စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီး လုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်… သူတို့တွေက စိတ်ယိမ်းယိုင်လွယ်တတ်ကြသလို ထိလွယ်ရှလွယ်တွေမို့ အသည်းကွဲမှာ ကြောက်တတ်ကြပါတယ်.. ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ မယုံကြည်တတ်သလို ချစ်သူထားဖို့ကိုလည်း အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်…
Related Article >>> ဓမ္မတာလာတော့မယ့် အချိန်ကို ကြိုတင်အသိပေးမယ့် Application (၅)ခု
B သွေးပိုင်ရှင်တွေကတော့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အရမ်းဆရာကျသူတွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်.. မိန်းကလေးဆိုရင် ဘဲကြည်စော် ၊ ယောကျာ်းလေးဆိုရင် စော်ကြည်ဘဲလို့ ပြောလို့ရလောက်တဲ့အထိ သူတို့တွေရဲ့ ဉာဏ်ကောင်းမှုတွေ ၊ ဟာသဉာဏ်ရွှင်မှုတွေက တစ်ဖက်သားကို တအားဆွဲဆောင်နိုင်သူတွေပါ… သူတို့တွေက မှီခိုကင်းတဲ့သူတွေ ၊ ကိုယ်ကိုယ့်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိသူတွေ ၊ သဘာဝအတိုင်းလှပနေသူတွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်…. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုနေထိုင်တတ်သူတွေကို သဘောကျပြီး ချစ်မိသွားပြီဆိုရင် ချစ်သူရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတိုင်းကို လက်ခံတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေပါ….
Women of Tomorrow II – http://bit.ly/2WK7oFQ
O သွေးပိုင်ရှင်တွေက သွေးအမျိုးအစား(၄)ခုထဲမှာ လူမှုဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံး သူတွေပါ… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုလွန်ကဲသူတွေဖြစ်သလို စိတ်ခံစားချက် ပြင်းထန်လွန်းသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငြင်းဆိုခံရမှာကို ခါးခါးသီးသီး ကြောက်နေတတ်သူတွေ ဖြစ်နေကြတာပါ။ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ ထုတ်မပြောတတ်ကြသူတွေမို့ နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သူတွေလို့ ထင်ချင်စရာပဲပေါ့… သူတို့တွေက နွေးထွေးကြင်နာပြီး စိတ်ရှည်တတ်တဲ့သူ ၊ သူတို့အပေါ် အလေးအနက်ထား ဂရုစိုက်သူတွေကို ပိုပြီးကြိုက်နှစ်သက်တတ်ကြပါတယ်….
Related Article >>> မြင်မြင်ချင်း အချစ် ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ရှိလာမှာ မဟုတ်တဲ့ Sapiosexual တို့အကြောင်း
AB သွေးပိုင်ရှင်တွေကတော့ သွေးအမျိုးအစားတွေ အားလုံးတွေထဲမှာ အကြင်နာတတ်ဆုံး ၊ အရိုးသားဆုံးနဲ့ ရိုမန့်တစ်အဆန်ဆုံး လူသားတွေပါ… နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်တဲ့နေရာမှာ ပြိုင်စံရှားသူတွေဖြစ်သလို စာနာသနားတတ်ကြသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့စိတ်နဲ့ထပ်တူနီးပါး တူညီသူတွေကို ပိုပြီးသဘောကျတတ်ကြပါတယ်….
ကဲ.. ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့သွေးအုပ်စုနဲ့လိုက်ပြီး မှန်မမှန်တိုက်ကြည့်လို့ရသလို ကြိတ်သဘောကျနေသူရဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း သွေးအမျိုးအစားသိရုံနဲ့ စပ်စုလို့ရတာပေါ့နော်… နောက်ထပ်လည်း ယောင်းတို့စိတ်ဝင်စားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို For Her Myanmar ကနေ တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်…
B သှေးပိုငျရှငျ မငျမငျကတော့ အကုနျနီးပါးတိုကျဆိုငျတယျရော
ယောငျးတို့ရေ… အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ရှေးခယျြတဲ့အခါမှာ ဘယျလိုရုပျရညျမြိုးမှ ၊ ဘယျလိုစိတျထားရှိသူမှ ၊ ဘယျလိုအပွုအမူရှိသူတှမှေ ဆိုပွီး နှလုံးမူထားတဲ့ စံသတျမှတျခကျြတှေ ရှိကွတယျဟုတျ .. ဒီလိုသတျမှတျခကျြတှကေ ကိုယျ့အကွိုကျကို လိုကျပွီး ကှဲပွားနိုငျတာပဲလို့ သမရိုးကတြှေးလို့ရပမေဲ့ မှေးနတေူ့တဲ့လူခငျြး အကွိုကျတူတတျတာမြိုး၊ ရာသီဖှားတူခငျြး အကွိုကျတူနတေတျတာမြိုးတှလေညျး ရှိနတောကို ယောငျးတို့ သတိထားမိကွမှာပါ… (ဥပမာ – အမှာအမြားစုက အကွိုကျခငျြး ထပျတူကနြတေတျတာမြိုးပေါ့…) ဒီလိုဆိုရငျ သှေးအမြိုးအစားတူတှမှောလညျး အကွိုကျခငျြးထပျတူ ကနြတောတှေ ရှိမှာပဲလေ… ဒီတော့ မငျမငျကနေ သှေးအုပျစုကို လိုကျပွီး ရှေးခယျြမိမယျ့ အခဈြရေးပုံစံတှကေို ပွောပွပေးမယျနျော…
A သှေးပိုငျရှငျတှကေ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံစံမြိုးကို သဘောကတြတျပါတယျ.. အခြိနျတိကတြဲ့သူမြိုးကို နှဈခွိုကျပွီး မြှျောလငျ့ခကျြကွီးမားသလို အရာရာတိုငျးကို စိတျရောကိုယျပါနှဈပွီး လုပျဆောငျတတျကွပါတယျ… သူတို့တှကေ စိတျယိမျးယိုငျလှယျတတျကွသလို ထိလှယျရှလှယျတှမေို့ အသညျးကှဲမှာ ကွောကျတတျကွပါတယျ.. ဒါကွောငျ့ လူတဈယောကျကို လှယျလှယျကူကူ မယုံကွညျတတျသလို ခဈြသူထားဖို့ကိုလညျး အခြိနျယူပွီး စဉျးစားတတျကွပါတယျ…
Related Article >>> ဓမ်မတာလာတော့မယျ့ အခြိနျကို ကွိုတငျအသိပေးမယျ့ Application (၅)ခု
B သှေးပိုငျရှငျတှကေတော့ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျရငျ အရမျးဆရာကသြူတှလေို့ ပွောလို့ရပါတယျ.. မိနျးကလေးဆိုရငျ ဘဲကွညျစျော ၊ ယောကျြားလေးဆိုရငျ စျောကွညျဘဲလို့ ပွောလို့ရလောကျတဲ့အထိ သူတို့တှရေဲ့ ဉာဏျကောငျးမှုတှေ ၊ ဟာသဉာဏျရှငျမှုတှကေ တဈဖကျသားကို တအားဆှဲဆောငျနိုငျသူတှပေါ… သူတို့တှကေ မှီခိုကငျးတဲ့သူတှေ ၊ ကိုယျကိုယျ့ကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိသူတှေ ၊ သဘာဝအတိုငျးလှပနသေူတှကေိုပဲ စိတျဝငျစားတတျကွပါတယျ…. ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောဆိုနထေိုငျတတျသူတှကေို သဘောကပြွီး ခဈြမိသှားပွီဆိုရငျ ခဈြသူရဲ့ ဖွဈတညျမှုတိုငျးကို လကျခံတတျတဲ့ လူမြိုးတှပေါ….
O သှေးပိုငျရှငျတှကေ သှေးအမြိုးအစား(၄)ခုထဲမှာ လူမှုဆကျဆံရေးအကောငျးဆုံး သူတှပေါ… ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုလှနျကဲသူတှဖွေဈသလို စိတျခံစားခကျြ ပွငျးထနျလှနျးသူတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ငွငျးဆိုခံရမှာကို ခါးခါးသီးသီး ကွောကျရှံ့နတေတျသူတှမေို့ သူတို့ရဲ့ခံစားခကျြတှကေို လှယျလှယျနဲ့ ထုတျမပွောတတျကွပါဘူး… သူတို့တှကေ နှေးထှေးကွငျနာပွီး စိတျရှညျတတျတဲ့သူ ၊ သူတို့အပျေါ အလေးအနကျထား ဂရုစိုကျသူတှကေို ပိုပွီးကွိုကျနှဈသကျတတျကွပါတယျ….
Related Article >>> မွငျမွငျခငျြး အခဈြ ဆိုတာ ဘယျတော့မှ ရှိလာမှာ မဟုတျတဲ့ Sapiosexual တို့အကွောငျး
AB သှေးပိုငျရှငျတှကေတော့ သှေးအမြိုးအစားတှေ အားလုံးတှထေဲမှာ အကွငျနာတတျဆုံး ၊ အရိုးသားဆုံးနဲ့ ရိုမနျ့တဈအဆနျဆုံး လူသားတှပေါ… နားလညျခှငျ့လှတျပေးတတျတဲ့နရောမှာ ပွိုငျစံရှားသူတှဖွေဈသလို စာနာသနားတတျကွသူတှဖွေဈပွီး သူတို့စိတျနဲ့ထပျတူနီးပါး တူညီသူတှကေို ပိုပွီးသဘောကတြတျကွပါတယျ….
ကဲ.. ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့သှေးအုပျစုနဲ့လိုကျပွီး မှနျမမှနျတိုကျကွညျ့လို့ရသလို ကွိတျသဘောကနြသေူရဲ့ အကွောငျးတှကေိုလညျး သှေးအမြိုးအစားသိရုံနဲ့ စပျစုလို့ရတာပေါ့နျော… နောကျထပျလညျး ယောငျးတို့စိတျဝငျစားမယျ့ အကွောငျးအရာတှကေို For Her Myanmar ကနေ တငျဆကျပေးဦးမှာမို့ ဆကျလကျစောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးနျော…
Tags: blood type, choose, honest, Intelligent, love, Romantic